APE: Munyori, Muparidzi, Muzvinabhizimusi | Martech Zone
APE: Munyori, Muparidzi, Entrepreneur
Chitatu, Kukadzi 13, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mukugadzirira kubvunzurudzwa kwedu naGuy Kawasaki, ndakatenga kopi ye APE: Munyori, Muparidzi, Muzvinabhizimusi-Maitiro Ekuburitsa Bhuku.
Ndakaverenga akawanda emabhuku aGuy Kawasaki uye ndave ndiri fan kwenguva yakati rebei (ita shuwa yekupinda mubvunzurudzo kekutanga paakanditumira ... nyaya inosetsa!). Iri bhuku rakatosiyana, hazvo… iro rakadzama nhanho-nhanho-rairo bhuku rekuti ungazvishambadze-sei ebook rako.
Vanyori Guy Kawasaki naShawn Welch vanotanga APE: Munyori, Muparidzi, Entrepreneur nenyaya yechokwadi yekushungurudzika kwaGuy nekutora kwake kwekupedzisira kuburitswa nemagetsi nekutenga kwakawanda kubva kukambani. Iri bhuku rinobva rafamba nemumatambudziko ese ebook - kubva pamafomati, kune zvishandiso, kusvika mukuparadzira kushambadziro. Zvakaoma zvakanyanya kupfuura zvaunofunga (kusvika bhuku rino!).
Iri bhuku rinotsanangura nzira dzese dzakaratidzirwa dzekugadzira yako ebook, kudzika pasi kune screenshots yezvishandiso zvekushandisa, masosi ekushandisa, uye nzvimbo dzekutengesa. Ndakashamiswa chaizvo nezvose zvakadzama. Ichokwadi nhanho-nhanho-nhungamiro yekuraira kune chero munhu kuti azvishambadze.
Ndakafadzwa zvekuti ndakatenga ndikagovera mamwe makopi matatu… ku Jenn uye Marty avo vese vari kushanda kumabook avo kwese kusvika kuna Nathan, mugadziri wedu, uyo achange achibatsira nekugadzira graphic.
Sei Ungaburitsa Bhuku?
Isu takatanga kufadzwa nemikana yekuzvitsikisa-pachedu patakabvunzurudza Jim Kukral. Jim akatinongedzera kwatiri kuti iyo yekuda curve yemabooks yakanga ichikwira nekukurumidza zvakanyanya kupfuura chaiko kuburitswa kwema ebook. Ino inguva isingafadzi kune vanhu kana makambani kuvaka kuvimbika uye chiremera nekuburitsa ebook.
Kana iwe uine chimwe chinhu chinoshamisa kutaura… uyu ndiwo mukana wako wekutsikisa uye nekugovana iwo!
Tags: apemunyorie-bookeBookasaitaGuy Kawasakikubudisamutsikisikuzvirumbidza
Big Data Insights kubva kuMicrosoft
Pa-Peji SEO Yakanakisa Maitiro muna 2013: 7 Mitemo yeMutambo
Feb 14, 2013 at 10:44 PM
Anopinda mukunyora chipoko mubhuku here? Ane chirongwa chekuti vanhu vasina nguva (kana pamwe tarenda) vanyore here?
Kukadzi 14, 2013 na3: 24 PM
Mhoro @ daveyoung: disqus, pane matipi ekunyora mubhuku. Ini ndinofunga Guy angangove wekutanga kukuudza iwe kuti co-munyori idanho rakakura kana iwe usina nguva kana tarenda. Ini ndaive nemubatanidzwa munyori mubhuku rangu uye akaita kuti zvese zvive nyore….